Zimbabwe Team Squad T20 World Cup 2016 20/20 WC
Zimbabwe is a test playing team in international cricket. Zimbabwe has played in 4 T20 world cup tournaments as the team withdrew from the 2nd T20 world cup of 2009. During these previous T20 tournaments, the Zimbabwe cricket team could not perform well and its best performance was in the 1st T20 world cup of 2007 when the team achieved 11th position. Zimbabwe has so far played 9 matches in the tournament out of which they won 3 and lost 6 matches while their winning percentage is 33.33%. Currently, Zimbabwe is at the 14th spot in ICC T20 rankings and it is even behind many associate member teams. But due to test status, Zimbabwe has qualified to play the 1st round of the ICC T20 world cup 2016.
Elton Chigumbura is the captain and all rounder in the Zimbabwe T20 team. Other main players in the Zimbabwe T20 team are Hamilton Masakadza, Chamu Chibhabha, Vusi Sibanda, Sikandar Raza, Charles Coventry, Stuart Matsikenyeri, Craig Ervine, Sean Williams, Brian Vitori, Tawanda Mupariwa, Tendal Chatara, Christopher Mpofu, Prosper Utseya and Greame Cremer. There are several good batsmen, bowlers and all rounders in the Zimbabwe team and their main task is to take Zimbabwe to the2nd round of the ICC T20 world cup 2016.